आमाबुबा हो—छोराछोरीलाई गोठालोले जस्तै हेरचाह गर्नुहोस् | अध्ययन
“आफ्नै भेडा चिन्न होशियार हो।”—हितो. २७:२३.
छोराछोरीलाई गोठालोले जस्तै हेरचाह गर्न आमाबुबाले के गर्नुपर्छ?
आमाबुबाले छोराछोरीलाई आध्यात्मिक रूपमा कसरी खुवाउन सक्छन्‌?
पारिवारिक उपासनाबाट केही युवाहरूले कस्तो लाभ उठाएका छन्‌?
१, २. (क) इस्राएली गोठालाले के-कस्तो काम गर्नुपर्थ्यो? (ख) आमाबुबा किन गोठालाजस्तै हुन्‌?
इस्राएलमा गोठालाको जीवन एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। तिनीहरूले उखुम गर्मी र कठाङ्ग्रिने जाडो सहनुपर्थ्यो। साथै आफ्ना भेडाहरूलाई जङ्गली जनावर र चोरहरूबाट पनि जोगाउनुपर्थ्यो। गोठालाले सधैं भेडाको हेरचाह गर्नुपर्थ्यो र कुनै भेडा बिरामी वा घाइते भयो भने उपचार गर्नुपर्थ्यो। तिनीहरूले पाठाहरूलाई विशेष ध्यान दिन्थे किनभने ती पाठाहरू हुर्किसकेको भेडाभन्दा कमजोर हुन्थे।—उत्प. ३३:१३.
२ ख्रीष्टियन आमाबुबा पनि गोठालाजस्तै हुन्‌। तिनीहरूमा गोठालाको जस्तै गुणहरू हुनुपर्छ। तिनीहरूले “यहोवाको डोऱ्याइबमोजिम अनुशासन अनि चेतावनी दिएर” छोराछोरीलाई हुर्काउने जिम्मेवारी पाएका छन्‌। (एफि. ६:४) तर यसो गर्न सजिलो छ? छैन। किनभने केटाकेटीलाई बहकाउन सैतानले विभिन्न झूट फैलाएको छ। उनीहरूमा गलत काम गर्ने झुकाव पनि छ। (२ तिमो. २:२२; १ यूह. २:१६) छोराछोरीलाई कसरी मदत गर्न सक्नुहुन्छ? गोठालोले जस्तै हेरचाह गर्न उनीहरूलाई राम्ररी चिन्नुपर्छ, खुवाउनुपर्छ र डोऱ्याउनुपर्छ। आउनुहोस्, यी तीन कुरा विचार गरौं।
छोराछोरीलाई राम्ररी चिन्नुहोस्
३. आमाबुबाले छोराछोरीलाई राम्ररी “चिन्न” के गर्नुपर्छ?
३ असल गोठालोले हरेक भेडालाई तन्दुरुस्त राख्न राम्रो हेरचाह गर्छ। यसबारे बाइबल यसो भन्छ, “आफ्नै भेडा चिन्न होशियार हो।” (हितो. २७:२३) आमाबुबाले पनि ‘आफ्ना भेडा’ अर्थात्‌ छोराछोरीलाई राम्ररी चिन्नुपर्छ। छोराछोरीले के गरिरहेका छन्‌ भनेर याद गर्नुपर्छ अनि उनीहरूको विचार र भावना बुझ्नुपर्छ। तपाईं कसरी यसो गर्न सक्नुहुन्छ? एउटा तरिका छोराछोरीसित नियमित कुराकानी गर्नु हो।
४, ५. (क) के गऱ्यो भने छोराछोरीलाई कुराकानी गर्न सजिलो लाग्न सक्छ? (शीर्षकमाथिको तस्बिर हेर्नुहोस्) (ख) के गर्दा तपाईंको छोराछोरीले कुराकानी गर्न सजिलो मानेका छन्‌?
४ कतिपय आमाबुबालाई किशोर अवस्थाका छोराछोरीसित कुराकानी गर्न गाह्रो लाग्छ। छोराछोरीले आफ्नो मनको कुरा बताउन अप्ठ्यारो मान्छन्‌। तपाईंको छोराछोरीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ भने के गर्न सक्नुहुन्छ? उनीहरूलाई झिजो लाग्ने गरी लामो कुराकानी गर्नुको साटो उनीहरूलाई कुराकानी गर्न सजिलो लाग्ने मौका खोज्नुहोस्। (व्यव. ६:६, ७) सँगै समय बिताउनुहोस्। उनीहरूसित कतै घुम्न जान सक्नुहुन्छ; सँगै खेल्न सक्नुहुन्छ वा घरायसी काम सँगै गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा छोराछोरीलाई कुराकानी गर्न सजिलो लाग्न सक्छ र उनीहरूले मनको कुरा खोल्न सक्छन्‌।
५ तपाईंका छोराछोरीले अझै पनि कुराकानी गर्न चाहेनन्‌ भने के गर्ने? यस्तो अवस्थामा अरू नै तरिका चलाउनुपर्छ। उदाहरणको लागि, तपाईंको छोरीलाई “आज दिनभरि तिमीले के गऱ्यौ” भनेर सोध्नुको साटो तपाईंले के-के गर्नुभयो भनेर बताउनु राम्रो हो। त्यसपछि उसले पनि आफ्नो कुरा बताउन थाल्छे। कुनै विषयमा उसको विचार बुझ्नुपऱ्यो भने “यो कुरा तिमीलाई कस्तो लाग्छ” भनेर सीधै सोध्नुको साटो “यो कुरा तिम्रो साथीलाई कस्तो लाग्छ” भनेर सोध्नु राम्रो हुन्छ। उसले जवाफ दिएपछि यसरी सोध्नुहोस्, “तिमी साथीलाई कस्तो सुझाव दिन्छयौ?”
६. तपाईं कुराकानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भनी कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ? तपाईं कसरी कुराकानी गर्न सजिलो व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ?
६ तपाईं सधैं कुराकानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ र तपाईंसित कुराकानी गर्न सजिलो छ भन्ने कुरा छोराछोरीले बुझ्नुपर्छ। तब मात्र उनीहरूले तपाईंसित खुलेर कुराकानी गर्नेछन्‌। छोराछोरीको कुरा सुन्नै नभ्याउने गरी व्यस्त हुनुहुन्छ भने उनीहरूले तपाईंलाई आफ्नो समस्या बताउने छैनन्‌। तपाईं कसरी कुराकानी गर्न सजिलो व्यक्ति बन्न सक्नुहुन्छ? “मसित कुराकानी गर्न जुनसुकै बेला आए पनि हुन्छ” भनेर मात्र पुग्दैन। उनीहरूले आफ्नो कुरा बताउँदा तपाईं रिसाउनुहुन्न अनि त्यसलाई हल्कासित पनि लिनुहुन्न भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्नुपर्छ। यस विषयमा धेरै आमाबुबाले राम्रो उदाहरण बसालेका छन्‌। उन्नाइस वर्षीय केइला यसो भन्छिन्‌, “म बुबासित जुनसुकै विषयमा पनि कुरा गर्न सक्छु। उहाँ कुरै नसुनिकन आफ्नो विचार थोपर्नुहुन्न बरु ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। त्यसपछि मात्र सल्लाह दिनुहुन्छ।”
७. (क) डेटिङजस्ता गम्भीर विषयमा कुरा गर्दा आमाबुबा कसरी व्यावहारिक हुन सक्छन्‌? (ख) छोराछोरी किन चिढिन सक्छन्‌?
७ छोराछोरीसित डेटिङजस्ता गम्भीर विषयमा कुरा गर्दा व्यावहारिक हुनुहोस्। त्यसको खतराबारे मात्र नबताउनुहोस् बरु त्यस्ता मामिलालाई सही तरिकाले सुल्झाउन मदत दिनुहोस्। उदाहरणको लागि, तपाईं एउटा रेस्टुराँमा जानुभयो अनि त्यहाँ पाइने खानेकुरा खाँदा हुने हानिबारे मात्र मेनुमा लेखिएको पाउनुभयो। तपाईं के गर्नुहुन्छ? अर्को रेस्टुराँ खोज्नुहुन्छ होला। त्यसै गरी छोराछोरी तपाईंसित कुनै सुझाव माग्न आउँदा खतराबारे मात्र बताउनुभयो भने के हुन्छ? उनीहरू तपाईंसित चिढिन सक्छन्‌ अनि सुझाव माग्नै छोड्न सक्छन्‌। (कलस्सी ३:२१ पढ्नुहोस्) पच्चिस वर्षीय एमिली यसो भन्छिन्‌, “डेटिङको विषयमा आमाबुबासित कुरा गर्दा उहाँहरू त्यसको नकारात्मक पक्षबारे मात्र बताउनुहुन्न। बरु कसैलाई चिन्नु र जीवनसाथी रोज्नु गलत होइन, राम्रै कुरा हो भन्नुहुन्छ। त्यसैले अप्ठ्यारो नमानी कुरा गर्न सक्छु। मेरो कुनै केटा साथी छ भने, त्यो पनि उहाँहरूलाई बताउँछु।”
८, ९. (क) छोराछोरीको कुरा ध्यान दिएर सुन्दा कस्तो फाइदा हुन्छ? (ख) छोराछोरीको कुरा सुन्दा तपाईंले कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ?
८ धीरजी हुनुहोस् र छोराछोरीको कुरा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने छोराछोरीलाई तपाईंसित कुराकानी गर्न सजिलो लाग्नेछ। (याकूब १:१९ पढ्नुहोस्) कात्या भन्ने एक्ली आमा यसो भन्छिन्‌, “पहिला म छोरीको कुरा त्यति सुन्दिनथें। उसलाई कुरा सिद्याउनै दिन्नथें। मलाई उसको कुरा सुन्न झर्को लाग्थ्यो। तर अहिले म त्यसो गर्दिनँ अनि छोरी पनि परिवर्तन भएकी छे। ऊ अहिले मसँग मन खोलेर कुरा गर्छे।”
छोराछोरीको कुरा सुनेर उनीहरूलाई चिन्नुहोस् (अनुच्छेद ३-९ हेर्नुहोस्)
९ एक किशोरीका बुबा रोनाल्डले पनि त्यस्तै अनुभव गरे। तिनी भन्छन्‌, “छोरीले स्कुलको एउटा केटोलाई मन पराएको कुरा गर्दा सुरुमा त मलाई झनक्क रिस उठ्यो। तर मैले यहोवा आफ्नो जनसित कत्ति धीरजी र व्यावहारिक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विचार गरें। अनि छोरीलाई सुधार्नुभन्दा पहिला उसलाई मनको कुरा भन्न दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो। उसलाई आफ्नो मनको कुरा बताउन दिएर राम्रो गरें। पहिलो पटक उसको मनको कुरा बुझें। उसको कुरा सुनेपछि उसलाई राम्रोसँग सम्झाउन सकें। उसले मेरो सुझाव मानेकी देख्दा मलाई अचम्म लाग्यो। ऊ आफ्नो आनीबानी सुधार्न इच्छुक भई।” छोराछोरीसित नियमित कुराकानी गर्दा उनीहरूको विचार र भावना अझ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले कुनै निर्णय गर्नुपर्दा तपाईंको पनि राय माग्नेछन्‌। *
छोराछोरीलाई राम्ररी खुवाउनुहोस्
१०, ११. छोराछोरीलाई सच्चाइबाट तर्केर जान नदिन तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ?
१० असल गोठालोलाई आफ्नो भेडा बगालबाट तर्किन सक्छ भन्ने कुरा थाह हुन्छ। भेडा बगालबाट अलि पर घाँस खान जान्छ अनि बिस्तारै-बिस्तारै बगालबाट टाढिंदै जान्छ। अन्तमा त्यो भेडा एक्लो हुन्छ। त्यसैगरि छोराछोरी पनि खराब सङ्गत र हानिकारक मनोरञ्जनले गर्दा बिस्तारै सच्चाइबाट तर्किन सक्छन्‌। (हितो. १३:२०) यस्तो अवस्थामा पर्नदेखि तपाईं उनीहरूलाई कसरी जोगाउन सक्नुहुन्छ?
११ छोराछोरीलाई सिकाउँदा कुनै कमजोरी देख्नुभयो भने तुरुन्तै सुधार्नुहोस्। वनको काँढा आफै तिखारिन्छ भन्ने नसोच्नुहोस्। बरु उनीहरूमा भएको असल गुणहरूलाई अझ बढाउन मदत गर्नुहोस्। (२ पत्रु. १:५-८) पारिवारिक उपासनाको बेला यस्तो मदत गर्न सक्नुहुन्छ। अक्टोबर २००८ को राज्य सेवा-ले यस्तो भन्छ, “अर्थपूर्ण पारिवारिक बाइबल अध्ययन नियमित रूपमा गरेर यहोवासामु आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न परिवारका शिरहरूलाई प्रोत्साहन दिइन्छ।” बुबाहरू हो, आफ्ना छोराछोरीलाई गोठालोले जस्तै हेरचाह गर्न के तपाईंले यो प्रबन्धको पूरापूर सदुपयोग गरिरहनुभएको छ? छोराछोरीलाई मदत गर्न प्रयास गर्नुभयो भने उनीहरूले तपाईंको कदर गर्नेछन्‌।—मत्ती ५:३; फिलि. १:१०.
उनीहरूलाई राम्ररी खुवाउनुहोस् (अनुच्छेद १०-१२ हेर्नुहोस्)
१२. (क) नियमित पारिवारिक उपासनाबाट केही युवाहरूले कस्तो लाभ उठाएका छन्‌? (“ उनीहरू यसको कदर गर्छन्‌” भन्ने पेटी पनि हेर्नुहोस्) (ख) तपाईंले पारिवारिक उपासनाबाट कस्तो लाभ उठाउनुभएको छ?
१२ क्यारेसा भन्ने किशोरीको अनुभव विचार गर्नुहोस्। उनी र उनको परिवारले पारिवारिक उपासनाबाट लाभ उठाएका छन्‌। उनी भन्छिन्‌, “पारिवारिक उपासनाको बेला सबै जना सँगै बसेर कुराकानी गर्न सक्छौं। यसो गर्दा हामी एकअर्कासित अझ नजिक भएका छौं अनि रमाइलो अनुभव बटुलेका छौं। बुबाले हरेक हप्ता पारिवारिक उपासना गराउनुहुन्छ। उहाँले पारिवारिक उपासनालाई महत्त्वपूर्ण ठान्नुभएको देख्दा हाम्रो पनि हौसला बढेको छ। बुबालाई आदर गर्न र परिवारको शिरको रूपमा हेर्न सकेकी छु।” तेइस वर्षीय ब्रिटनी यसो भन्छिन्‌, “पारिवारिक उपासनाले मलाई आमाबुबासँग नजिक बनाएको छ। उहाँहरू मेरो समस्या बुझ्नुहुन्छ र साँच्चै ख्याल गर्नुहुन्छ। यसले हाम्रो पारिवारिक सम्बन्ध बलियो बनाएको छ र हामी एक हुन सकेका छौं।” हो, असल गोठालो बन्ने राम्रो तरिका छोराछोरीलाई पारिवारिक उपासनामार्फत आध्यात्मिक खाना खुवाउनु हो। *
१३. छोराछोरी यहोवाको सेवा गर्न कसरी इच्छुक हुन सक्छन्‌?
१३ असल गोठालोले आफ्नो बगाललाई डोऱ्याउन र रक्षा गर्न लट्ठी चलाउँछ। गोठालो आफ्नो भेडालाई “राम्रो चरनमा” डोऱ्याउन चाहन्छ। (इज. ३४:१३, १४) तपाईं पनि छोराछोरीलाई यहोवाको बाटोमा डोऱ्याउन चाहनुहुन्छ। उनीहरूले पनि भजनरचयिताले जस्तै महसुस गरेको चाहनुहुन्छ। तिनले यस्तो लेखे, “हे मेरा परमेश्वर, तपाईंको इच्छाबमोजिम गर्न म प्रसन्न छु। तपाईंको व्यवस्था मेरो हृदयमा छ।” (भज. ४०:८) यस्तो महसुस गर्ने युवाहरूले यहोवालाई जीवन समर्पण गर्नेछन्‌ र बप्तिस्मा गर्नेछन्‌। उनीहरू यस्तो निर्णय गर्न सक्ने हुनुपर्छ र यहोवाको सेवा गर्न इच्छुक पनि हुनुपर्छ।
१४, १५. (क) छोराछोरीले बाइबलको शिक्षामा शङ्का गर्दा आमाबुबाले के गर्न सक्छन्‌? (ख) छोराछोरीले शङ्का गर्नुको कारण के-के हुन सक्छन्‌?
१४ तपाईंको छोराछोरीले यहोवासित नजिक हुन कोसिस नगर्लान्‌। उनीहरूले यहोवाका साक्षीहरूले विश्वास गरेका कुरा कतै गलत पो हो कि भनेर शङ्का गर्लान्‌। तपाईं के गर्नुहुन्छ? यहोवालाई प्रेम गर्न र उहाँले हाम्रो लागि गर्नुभएको सबै कुराको कदर गर्न उनीहरूलाई सिकाउनुहोस्। (प्रका. ४:११) त्यसपछि मात्र उनीहरूले यहोवाको सेवा गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछन्‌।
१५ तर उनीहरूले अझै पनि शङ्का गर्छन्‌ भने नि? तपाईं उनीहरूलाई कसरी गोठालोले जस्तै हेरचाह गर्न सक्नुहुन्छ? यहोवाको सेवा गर्नु नै जीवन बिताउने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो अनि यसले अपार आनन्द दिन्छ भनेर कसरी बुझाउन सक्नुहुन्छ? उनीहरूलाई शङ्का लाग्नुको कारण पत्ता लगाउनुहोस्। जस्तै: छोराले शङ्का व्यक्त गर्दा ऊ बाइबलको शिक्षासित सहमत छैन भन्ने निष्कर्षमा नपुग्नुहोस्। उसलाई साथीहरूलाई प्रचार गर्न डर लागेको मात्र हुन सक्छ। अथवा साथीहरूले बेवास्ता गरेकाले तपाईंकी छोरीले एक्लो महसुस गरेकी हुन सक्छ। यसले गर्दा उसलाई परमेश्वरको शिक्षा व्यावहारिक छैन जस्तो लागेको हुन सक्छ।
उनीहरूलाई डोऱ्याउनुहोस् (अनुच्छेद १३-१८ हेर्नुहोस्)
१६, १७. सत्यलाई आफ्नो बनाउन छोराछोरीलाई कसरी मदत गर्न सक्नुहुन्छ?
१६ कारण जेसुकै भए पनि तपाईं छोराछोरीलाई शङ्का हटाउन मदत गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी? धेरै ख्रीष्टियन आमाबुबाले छोराछोरीलाई यी प्रश्नहरू सोध्ने गरेका छन्‌, “तिमीलाई ख्रीष्टियनको रूपमा जीवन बिताउन गाह्रो लाग्छ कि सजिलो? यहोवाको सेवा गर्दा कस्ता त्यागहरू गर्नुपर्छ? अहिले र भविष्यमा पाइने फाइदाबारे सोच्दा कस्तो लाग्छ? यी फाइदाहरू त्यागहरूभन्दा महत्त्वपूर्ण छैनन्‌ र?” यी प्रश्नहरू केरकार गर्ने तरिकामा नभई मनैदेखि र चाखलाग्दो तरिकामा सोध्नुहोस्। कुराकानीको बेला मर्कूस १०:२९, ३० छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। केही युवाहरूले आफ्नो विचार दुइटा सूचीमा लेख्ने गरेका छन्‌। पहिलो सूचीमा फाइदाहरू र अर्कोमा त्यागहरू। यसले तपाईं र तपाईंको छोराछोरीलाई समस्या पत्ता लगाउन र त्यो सुल्झाउन मदत गर्न सक्छ। हामी चासो देखाउने व्यक्तिलाई बाइबलले सिकाउँछ र “परमेश्वरको प्रेम” किताबबाट अध्ययन गराउँछौं भने आफ्नै छोराछोरीलाई गराउनु पर्दैन होला र? के तपाईंले यसै गरिरहनुभएको छ?
१७ हुर्कंदै जाँदा छोराछोरीले यहोवाको सेवा गर्ने कि नगर्ने भनेर आफैले निर्णय गर्नुपर्छ। तपाईंले यहोवाको सेवा गर्ने निर्णय गर्नुभएकोले उनीहरूले पनि त्यस्तै निर्णय गर्नेछन्‌ भन्ने छैन। उनीहरूले सत्यलाई आफ्नो बनाउनै पर्छ। (हितो. ३:१, २) उनीहरूलाई यहोवाको नजिक हुन गाह्रो लाग्छ भने नि? निम्न प्रश्नहरू विचार गर्न लगाएर छोराछोरीलाई आफ्नो विश्वास जाँच्न मदत गर्नुहोस्, “परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर म किन विश्वास गर्छु? यहोवाले साँच्चै मेरो कदर गर्नुहुन्छ भनेर म कसरी विश्वस्त भएँ? के मलाई यहोवाका आज्ञाहरू मेरै भलाइको लागि हो जस्तो लाग्छ?” आमाबुबा हो, असल गोठालो हुनुहोस् र धैर्य गर्दै छोराछोरीलाई डोऱ्याउनुहोस्। यहोवाको सेवा गर्नु नै जीवन बिताउने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो भनेर बुझ्न मदत दिनुहोस्। *—रोमी १२:२.
१८. आमाबुबाले कसरी महान्‌ गोठालो यहोवाको देखासिकी गर्न सक्छन्‌?
१८ सबै ख्रीष्टियनले महान्‌ गोठालो यहोवाको देखासिकी गर्नुपर्छ। (एफि. ५:१; १ पत्रु. २:२५) आमाबुबा हो, आफ्नो बगाललाई अर्थात्‌ छोराछोरीलाई चिन्नुहोस्। छोराछोरीले परमेश्वरको आशिष्‌ पाएको चाहनुहुन्छ भने उनीहरूलाई डोऱ्याउनुहोस्। सत्यको मार्गमा हिंड्न मदत दिएर उनीहरूलाई गोठालोले जस्तै हेरचाह गर्नुहोस्।
^ अनु.9थप जानकारीको लागि पारिवारिक आनन्द किताबको अध्याय ६, पृष्ठ ६४-७५ हेर्नुहोस्।
^ अनु. 12 थप जानकारीको लागि मार्च १५, २०१४ को प्रहरीधरहरा, पृष्ठ १७-१९ मा भएको “पारिवारिक उपासना—यसलाई अझ रमाइलो बनाउन सक्नुहुन्छ कि?” भन्ने लेख हेर्नुहोस्।
^ अनु. 17 यसबारे थप जानकारीको लागि जुलाई १, २०१२ को प्रहरीधरहरा, पृष्ठ २२-२५ हेर्नुहोस्।
उनीहरू यसको कदर गर्छन्‌
दुई युवाले पारिवारिक उपासनाबाट कस्तो लाभ उठाएका छन्‌, सुनौं।
“पारिवारिक उपासनाले तपाईंलाई परिवार र यहोवाको नजिक हुन मदत गर्छ। तपाईं कस्तो किसिमको मानिस हो र तपाईंको आध्यात्मिक अवस्था कस्तो छ भनेर थाह पाउन यसले मदत गर्छ। तपाईंले कस्तो उन्नति गर्नुपर्छ भनेर बुझ्न पनि मदत गर्छ।”
“पारिवारिक उपासनाको बेला आफ्नो विचार सजिलै व्यक्त गर्न पाउँछौं। तनावलाई एकातिर पन्छाएर आफ्नो आध्यात्मिकतालाई ध्यान दिने मौका पाउँछौं। पहिला हाम्रो पारिवारिक उपासना गर्ने बानी थिएन तर अहिले छ। यो यहोवाको आशिष्‌ हो।”